के तपाईलाई बारम्बार तिर्खा लाग्छ? हुनसक्छ गम्भीर विराम
Homeसमाचारके तपाईलाई बारम्बार तिर्खा लाग्छ? हुनसक्छ गम्भीर विराम
February 1, 2021 admin समाचार 5069
पानीले हाम्रो जी’वनलाई सन्तुलित बनाउँछ तर यदि यसको परिमाण शरीरमा असं’तुलित भयो भने यसले जीव’नलाई संकट खडा गर्न सक्छ। शरीरको भित्री प्रणा’लीले तिर्खा अनुसार पानीको आवश्यक्ता पुर्‍याउँछ ।यद्यपि धेरै चोटि कोही मानिसहरू अत्य’धिक तिर्खा महसुस गर्छन् वा उनीहरू अत्यधिक र धेरै पानी पिउन थाल्छन्।
वास्तवमा, अ’धिक तिर्खा महसुस गर्ने अवस्था गम्भीर रोगको संकेत हुन सक्छ। धेरै चिकित्सा अनुस’न्धानले भनेको छ कि स्वस्थ व्यक्तिको लागि प्रतिदिन औसत २ देखि ३ लिटर पिउने पानी पर्याप्त हुन्छ । पानीको आवश्यकताको यो मात्रा केही सर्तह’रूमा कम वा बढ्न सक्छ ।
जब हाम्रो शरीरले अधिक परिश्र’म गर्दछ वा हामी एक उच्च स्थानमा हुन्छौं वा अत्य’धिक तातो तापक्रम रहेको अवस्थामा हामी सामान्य भन्दा बढी पानीको आवश्यकता महसुस गर्दछौं। तर कहिलेकाँही केही बिरामीहरूमा, मानिस’हरूलाई तिर्खा लाग्छ वा फेरि उनीहरूले अधिक पानी पिउन थाल्छन् । यो बुझ्नु मह’त्वपूर्ण छ कि तपाईंलाई किन तिर्खा लाग्छ र यो कुन रोगको संकेत हो:
यी हुन् अत्या’धिक तिर्खाका कारणहरू :
चिकित्सा सर्तमा, अत्याधिक तिर्खाको अवस्था’लाई ‘पोलिडिप्सिया’ भनिन्छ। यस अवस्थामा सम्ब’न्धित व्यक्तिले अधिक पानी पिउँछ, जुन अवस्थामा शरीरमा सोडि’यमको कमी हुन सक्छ।
वाकवा_क वा बान्ता जस्तो लक्षण पनि देखा पर्न सक्छ। यस बाहेक तपाईले धेरै पिसाब गर्ने सम’स्याको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। तर त्यहाँ केहि रोगहरू छन् जसमा पोलिडि’प्सिया अर्थात् अत्याधिक तिर्खा प्रमुख लक्षण हो।
आज’कल यो प्रत्येक उमेर समूहमा सामान्य प्र’चलित रोग भएको छ। यो रोग कसैलाई खराब जीवनशैली वा आनुवंशिक कारणले हुन सक्छ । दोहोरिने तिर्खा यसको पहिचा’नको प्रमुख विशेषता हो।
यस जीवनशैली सम्ब’न्धित रोगमा, रगतमा चिनीको मात्रा बढ्छ, जसले मिर्गौलाले सजिलैसँग फिल्टर गर्न सक्दैन। यो चिनी पिसाबको साथ बाहिर आउँछ, जसको कार’णले शरीरमा पानीको अभाव हुन्छ। यो बारम्बार तिर्खाको कारण हो । यसका लागि जाँच गर्न आ’वश्यक छ । यी ल’क्षणहरू शरीरमा देखिएमा चाँडै तपाइँले मधुमेहसम्बन्धी जाँच गर्नुहोस् ।
यसको सीधा अर्थ शरी’रमा पानीको कमी हुनु हो । खाना विषाक्तता, पखाला, संक्रमण, ज्वरो वा जलेको मुख्य कारण’हरू हुन् । बारम्बार तिर्खा, सुख्खा मुख, थकान, बान्ता, वाकवाकी र बेहोस हुनु यसको लक्षणहरू हुन्। डिहाइड्रसनको बिरा’मीलाई ठीक पानी र आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट्स दिएर निको हुन सक्छ । तर कहिलेकाहीं लापरवाहीमा यसले मृ’त्युलाई पनि निम्त्याउन सक्छ।
सामा’न्य अर्थमा, मुटुको धडकन बढ्ने, बेचैनी र घबराहटको भावनालाई चिकित्सा चिन्ता भनिन्छ। यस्तो अवस्था’मा, मुख पनि सुखा हुन्छ, जसको कारणले व्यक्तिले अधिक पानी पिउँछ। यस्तो अवस्थामा, केही एन्जाइ’महरूले पनि मुखमा बनेको र्‍यालको मात्रा कम गर्दछ, जसको कारण बढी तिर्खा लाग्न सक्छ। जब यी लक्षण’हरू देखा पर्न थाल्छन्, तब बुझ्नुहोस् शरीर’मा पानीको अभाव छ!
धेरै पटक चि’ल्लो वा मसलादार खाना खाएपछि शरीरले सजिलै पचाउँन सक्दैन । शरीरलाई प्रशस्त खाना पचाउन अझ बढी पानी चाहिन्छ। यसले शरीरमा पानीको अभाव गराउँछ र अत्य’धिक तिर्खाको कारण हुन सक्छ।
अत्याधिक पसिना विशेष गरी तातो र आर्द्र मौसममा देखा पर्दछ। तापक्रमलाई सन्तुलनमा राख्न हाम्रो शरीरले धेरै पानीको माग गर्दछ। यसका कारण पनि हामी’लाई अधिक तिर्खा महसुस हुन्छ ।
समाधा’न के हो ?
अत्यधिक तिर्खाको नोक्सानबाट बच्न हामीले सर्वप्रथम तिर्खालाई सन्तुलनमा राख्नु’पर्दछ । एकै पटकमा धेरै पानी पिउनु हुँदैन । घरेलु उपचार पनि प्रभावकारी हुन सक्छ। उदाहर’णको लागि, अमलाको धुलो र महको मिश्रण गरी खाने वा चिरा सौंफ खाँदा पनि कृत्रिम तिर्खा कम गर्न सकिन्छ।
एक चम्चा कालो म’रिज धुलो चार कप पानीमा उमालेर पिउँदा पनि तत्कालको तिर्खा’लाई मेटाउन सकिन्छ । यसले तपाईंलाई राहत दिनेछ । तिर्खाको अधिक समस्या भएमा चिकित्स’कसँग सम्पर्क गरी सल्लाह लिनु पर्छ। – खबरहबबाट
आज मिति २०७७ माघ १९ गते सोमबारको राशिफल हेर्नुहोस्
कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक, एक जनाको रद्द
श्रीमतीको जन्मदिनमा मदनकृष्ण श्रेष्ठले सार्वजनिक गरे मन रुवाउने गीत (भिडियो हेर्नुहोस्)
December 29, 2020 admin समाचार 5802
हाँस्य क’लाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठको जि’वनमा केही वर्ष अघि सम्म आजको दिन निकै उल्ला’समय हुन्थ्यो । तर आज उनी नि’रास छन् । आज पौष १४ गते श्रेष्ठको जिवन’संगीनीको जन्मदिन । तर मदनलाई उनको श्रीमतीले संधैका लागि
माइतीसंग ऋ’ण मागेर दुवई पठाएका श्रीमानले, ‘म नेपालमै छु केटीले मलाई राखी ६ हजार पठाउ’ भनेर अ’चानक फोन गरे (भिडियो सहित)
February 19, 2021 admin समाचार 4236
मोरगंकी सपना अहिले २८ वर्षकी भइन् । पारिवारिक आ’र्थिक अवस्थाका का’रण उनले पढ्न सकिनन् । त्यसैले उनी त्यहाँकै एक धागो उद्योगमा काम गर्न थालिन् । दुई चार पैसा भएपनि परिवारलाई स’हयोग होला भनेर उनले काम
थारु म्युजिक भिडियो गोरी-गोरी सार्वजनिक
August 23, 2020 admin समाचार 18213
थारु समुदा’यको अटवारी पर्व भाद्र ७ गते अर्थात आ’जको दिन गोरी गोरी बोलको थारु म्यु’जिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । गोरी गोरी दिल मोर चोरी बोलको थारु म्युजिक भि’डियो सीएस फिल्मस् प्रालि धनगढीको युट्युव च्यानलबाट
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (223018)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (215033)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (214709)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (213001)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (211884)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (210828)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (209434)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (209326)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (177990)